Two Point Hospital: nyowani yekuvandudza ine yakakura maitiro ekugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Kune huwandu hukuru hwemitambo yemavhidhiyo pamusika weese masitayera uye zvikamu zvekugutsa huwandu hukuru hwevatambi vakasiyana kwazvo. Iyi igoridhe remazita iwayo anogona kutambwa kana kusadiwa nevatambi muzvikamu zvakaenzana. Nekudaro, kune avo vanofadzwa nerudzi urwu rwevatungamiriri vhidhiyo mutambo, isu tinopa nyowani nyowani kumusoro wenyaya Two Point Hospital, mauri muchawana mukana wakakura wekugadzirisa.
Kana iwe waitoziva zita rekuti Two Point Hospital kana iri kekutanga kuti uve neruzivo nezvaro asi zvinokufadza, unofanira kuziva izvi nyowani yemahara yekuvandudza iyo inobvumidza nyore nyore kugadzirisa echipatara dhizaini sarudzo kuti uwedzere runako kune iripo 3D mifananidzo. Iko kuwedzera kutsva kunodaidzwa kuti Interior Designer uye sezvandinotaura, zviri mahara uye zvinokutendera iwe kugadzirisa dhizaini yemukati yezvipatara iwe aunokwanisa kubata mumutambo wevhidhiyo.
Ndiwo mutambo wevhidhiyo usina mhirizhonga, inokodzera chero zera ripi zvaro uye yatinogona kunakidzwa semhuri. Nayo tinofanirwa kugadzira hukuru hukuru hwehushe uye tigoziva maitiro ekuzvibata nemazvo kuti zvese zvishande. Saka vateveri vekurapa, zvirokwazvo iwe uchawana mune ino kuvandudza kona yako yedhijitari maunoshandisa maawa. Zvino, iwe unogona zvakare kugadzirisa makapeti, pasi, mifananidzo, madziro, nezvimwe, kugadzira dhizaini yepamusoro yemukati...
Dhizaini inogona kuitwa kunyangwe uchishandisa mavara kana mifananidzo kuti isu tinogadzira kana kuve isu pachedu muchikwata chedu, uye nekudaro tinovashandisa semuenzaniso wezvakagadzirwa. Asi pakupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve iri zita, tarisa matrailer, dhawunirodha zita rezasi uye iyo yemahara yekuvandudza, nezvimwe, unogona kutarisa kune akakurumbira zvitoro zve Humble Store uye, hongu, iyo inozivikanwa Valve: chiutsi. Ndinovimba unofarira zita uye rakubatsira kuti uzviwane kana wanga usati watoziva ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Two Point Hospital: nyowani yekuvandudza ine hukuru hwekugadzirisa hunyanzvi